जब कांग्रेसीले नै देउवालाई संघियता घारेज गर्न भने ... - Lekh-Patra
जब कांग्रेसीले नै देउवालाई संघियता घारेज गर्न भने …
काठमाडौँ – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफू ‘मुख्यमन्त्री’ हो कि ‘मुख मन्त्री’ हो भन्ने आफूलाई नै थाहा नभएको बताएका छन् ।
शनिबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पुँजी बजारसम्बन्धी कार्यक्रममा उनले भने, ‘म त हिजो जिल्ला विकास समितिको सभापति भएको मान्छे हो । त्यतिबेला त्यहाँ धेरै पावर थियो त ! अहिले नामको मात्र मन्त्री, मुख्यमन्त्री रे…! मैले अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भनेको छु, संघीयता मन परेको छैन भने ‘क्यान्सिल इट’ ।
नेपालको संघीयता विश्वमै महाकमजोर भएको उनले टिप्पणीसमेत गरे । ‘संसारमा संघीयता सबैभन्दा कमजोर भएको भारत हो, त्यसभन्दा महाकमजोर नेपालको संघीयता भयो,’ उनले कार्यक्रममा सहभागीलाई प्रश्न गर्दै भने ,‘केन्द्रीय सरकार र स्थानीय हिजो पनि थियो । संघीयता भनिएको छ, जग्गाको बारेमा अधिकार छैन । मोदी काश्मिरमा जाँदा त्यहाँको मुख्यमन्त्रीले मेरो ठाउँमा ल्याण्ड गर्न दिन्न भनेको त सुन्नु भएकै होला नि…! माथिका मान्छेले पावर दिन चाहँदैन । पुलिस यहाँ आएको छैन हो । माथिकाले भन्ने होला पुलिस नै प्रदेशमा गए गृहमन्त्रीले के जुम्रा मारेर बस्ने ? यो खालको समस्या छ । यो सबै कुरा पुँजीसँग जोडिन्छ ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले अगाडी भने, ‘कृषि प्रधान देश भन्ने पनि हामी । खान नपाउने पनि हामी नै हो । म हुम्ला जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु । हेर्नुहोस् त अहिले पनि खान नपाएर आएका छौँ भनिरहेका छन् ।’ यतिमात्र होइन उनले कर्णालीका पत्रकारले आफूले गरेको कामको प्रशंसा नगरेको भन्दै आलोचनासमेत गरे । ‘अन्य प्रदेशमा बजेट बढ्दा मैले घटाएर ल्याएँ, तर यहाँका कुनै पनि पत्रकारले वाह मुख्यमन्त्री राम्रो गरिस् भनेर लेखेनन्,’ उनले भने, ‘म आज आफूलाई सौभाग्यशाली ठान्छु । मैले राम्रो सचिव पाएँ, अर्थको विज्ञ ।’
‘पुँजी बजारबाट कोही अरबपति भएका र अरबपतिबाट रोडपति भएका भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ,’ उनले पुँजी बजारबारे टिप्पणी गर्दै भने,‘ हामी नेपालीहरु बाँदरजस्ता भयौँ । आफू पनि घर नबनाउने अर्काको घर पनि बिगार्ने ।’ साथै उनले सेयर बजारमा भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले ब्याजमा सापटी लिएर पुँजी बजारमा लगानी गर्ने प्रचलनको अन्त्य गरेर जे छ त्यसैलाई लगानी गर्ने व्यवहारको विकास गर्नुपर्ने तर्क पनि राखे । उत्पादनको निर्यात र आयातको सन्तुलन नमिल्दा पनि पुँजी बजारको विकास नभएको उनको ठम्याइ थियो ।